खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? – Sapana Sanjal
June 1, 2021 889
Sapana Sanjal : खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? खोकी र ज्वरो भन्दा सुँघ्न सक्ने शक्ति गुमाउनु को-भिड-१९ को स्पष्ट सङ्केत हुन सक्छ। अनुसन्धानहरूले सुझाए अनुसार को- भिड १९ को लक्षण खोकी वा ज्वरो भन्दा गन्ध थाहा नपाउनु भरपर्दो सङ्केत हुनसक्छ ।
Prevकालो ढुसीको संक्रमण बाँके र काठमाडौंको संक्रमितमा देखिएको पुष्टि
Nextउपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन : बल्ल हुने भयो सहज